Umlingisi ku-Muvhango ukhuluma ngebhizinisi lakhe lezolimo | Scrolla Izindaba
Umlingisi ku-Muvhango ukhuluma ngebhizinisi lakhe lezolimo
Mhlawumbe kwabanye ukulingisa yinto eseqhopheleni eliphezulu kunokulima, kepha umlingisi uGabriel Temudzani, uyithanda ngokulinganayo lemisebenzi yomibili.
“Ngingaba ngumuntu ojabule kakhulu uma ngingase ngibe ngumlimi odayisa ngokugcwele,” kusho uTemudzani ogubha iminyaka engama-21 edlala indawo yeNkosi u-Azwindini Mukwevho ku-Muvhango.
“Ngifisa abalimi abamnyama babe nobudlelwano obusondelene nemakethe. Ngikholelwa ekutheni singalwa nobubha ngezolimo futhi sivulele abantu bakithi amathuba omsebenzi,” etshela abakwa-Scrolla.Africa engxoxweni ekhethekile.
Uthe, uyazifela ngokulima kanye nokusiza abanye njengoba ethuthuka njengomlimi.
Uthe, ukhulele ezigodini lapho ukulima kuyindlela yokuphila.
“Nginqume ukuba ngumlimi sengimdala,” kusho yena.
Uthe, isinqumo sakhe sokufunda ezolimo saqhamuka ngenxa yenkolelo yakhe eqinile yokuthi ukuthuthukisa ulwazi lwakho ngokusemthethweni kanye nokusebenzisa izindlela zesimanje eziqhutshwa ubuchwepheshe, kunamandla okukhulisa umkhiqizo ngokushesha.
Uthathe gokusemthethweni izintambo zomsebenzi wephrojekthi yomndeni wakhe yokulima ngowezi-2016 kanti uhambo lube luhle kakhulu.
Kumanje iphrojekthi isivulele abasebenzi abane amathuba okusebenza unomphela kanye nenqwaba yabasebenzi abasebenza ngezikhathi ezithile zonyaka.
UTemudzani uveze ukuthi, le phrojekthi maduze izobhaliswa ngokusemthethweni e-Limpopo.
“Ngaleli pulazi, ngihlose ukulwa nobumphofu, ngidale amathuba omsebenzi futhi ngishintshe inkulumo ezingezinhle ngabalimi abamnyama,” esho.
“Ngifuna ukwakha izinhlelo eziqinile ezizoqinisekisa ukuthi abalimi abaningi abamnyama bathola imakethe yezolimo enenzuzo enkulu.”